Wallström oo shir u qabanaysa haween Suuriyaan ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wallström oo shir u qabanaysa haween Suuriyaan ah
La daabacay måndag 11 januari 2016 kl 14.35
"Kaalin bay ka qaadan karaan ayaaha dalkooda"
Wasiirka arrimaha dibadda Sweden Margot Wallström ayaa qorsheynaysa in ay xoojiso kaalinta ay haweenka ku leeyahiin wadahadala nabadeed ee dhawaan la damacsanyahy in loo qabto kooxa isku haya dalka Suuriya.
Sidaa daraaded ayey Wallström kulan ugu qaban doonta Stockholm dhamaadka bisha kooxa haween ah oo miisaan ku leh gudaha waddanka Suuriya. Qorsha arrinta ayey wasiiradda ku dhawaaqday maalintii axadda oo qayb-galaysa kulan ku sabsanaa arrimaha difaaca oo lagu qabtay degaanka Sälen.
- Waxaan rajeyneynaa in ay haweenka suuriyaanka dareemaan in aysaan isku arkin keliya dhibanayaasha dagaalka ka socda dalkooda balse isku arkaan in yahiin kuwo ka ciyaari kara kaalin weyn ayaaha dalkooda, ayey tiri Wallström oo u warameysay raadiyaha Sweden.
Wadohadala nabadeed ee dhawaan la qorsheynayo in la qabta ayaa waxaa jira dhowr haween ah oo ka mid ah wakiilada mucaaradka. Balse tirada dumarka ee ka qayb-galayasa wadohadaladan kuma filna, ayey tiri Margot Wallström iyadoo weliba raacisay in tahay wax lala yaabo haweenka in aysan sidaas uga muuqan wadahadala nabadeed ee Suuriya taas oo keeni karta in haddii heshiis nabadeed la gaaro danaha haweenka mesha ka baxaan:
- Waan ogahay in ay jiraan haween badan oo doonaya in codkooda la maqlo. Waxaana New York iyo meel kaleba kula kulmey haween noocaas ah. Marka waxaa filayaa in aan dhameystiri doono marti qaadida haween Suuriyaan ah oo miishan ku leh waddankas, waxay ahaan karaa haween siyaasadda ku jira ama ururada bulshada rayidka ah ka mid ah. Waxaan filaynaa in aan kulan u qabano si ay kaalin ugu yeeshaan wadoxaajoodyada nabadeed ee dhawaan la qorsheynayo in lagu qabto Genéve iyo London, ayey tiri Margot Wallström.
Waxaa la filayaa in wadoxaajoodkan nabadda la qabto inta u dhaxeysa bilaha Januari iyo Februari. Wallström ayaa doonaysa ka hor shirweynaha waanwaanta nabadda in ay Stockholm ugu qabato kulan haweenkan Suuriyaanka ah.
Bishii december ayey aheyd markii Margot Wallström hirgelisay shabakad haween ah oo ah dhexdhexaadiyaal, si wax looga qabto kaalinta hooseysa ee haweenka ku leeyahiin dhexdhaxaadinta dagaalada caalamka ka aloosan. Inkastoo kulanka loo qabanya haweenka Suuriyaanka ah middas waxba ka quseynin. Balse waxa keliya ee aan hadda doneynaa martigelinta shirka loo qabanya haween ka soo jeeda Suuriya, ayey tiri Wallström.
- Shirka u qabsoomidiisa ayaan u sahlaynaa, una abuureynaa fursad ay ku kulmaan Stcokholm.
Waxayna Wallström sheegtay qorshahaan in uu qayb ka yahay ballanqaad ay horey u jeedisay oo ah in siyaasadda arrimaha dibadda ee Sweden ku dhisnaan doonta waxa la jiraahdo feminism.